यस चित्रकला "को चुम्बन" Gustava Klimta: इतिहास र विवरण
Gustav klimt गरेको संसारभरि मान्यता, तर सबै भन्दा लोकप्रिय चित्रकला "द चुम्बन" छ। यो मास्टर को सबै भन्दा राम्रो सिर्जनाहरू को एक भनिन्छ कारण बिना छैन। सौन्दर्य, यसको सबै immensity मा शुद्धता र प्रेम गर्न ODE।
Gustav klimt को XXI सताब्दी को बीचमा, अस्ट्रिया मा जन्म भएको थियो। जुलाई 14, 1862 - को अष्ट्रीया चित्रकला को लागि अनमोल दिन, किनभने यो, देखा मा विकसित र प्राप्त पहिचान नोव्यू कलाकार धन्यवाद छ। आफ्नो काम मा, त्यो पहिलो स्थानमा महिला शरीर को सौन्दर्य extolled, त्यसैले आफ्नो काम को एक ठूलो भाग एक स्पष्ट कामुकता मा निहित छ।
भने कम्तिमा सही पथमा धक्का, आफ्नो भाग्य निर्धारण गर्न बुबा klimt, एक कलाकार-मुद्राकार थियो।
उहाँले को स्कूल मा एक उपयुक्त शिक्षा प्राप्त सजावटी कला, भियना मा स्थित छ जो।
जीवन आफ्नो मातृभूमि को कला को एकेडेमी मा एक प्रोफेसर बन्ने, आफ्नो जीवनकालमा महिमा र आदर प्रकट भएको छ, कलाकार गर्न प्रकारको छ।
Gustav klimt फेब्रुअरी 6, 1918 थिएन।
यस्तो थिएटर रूपमा - प्रारम्भिक काम, "व्यावसायिक ब्रश परीक्षण", सबैभन्दा भाग लागि सार्वजनिक ठाउँमा सजाउनु भन्ने frescoes शामिल थिए। सबै चित्रहरु को "प्रकृतिवाद" शैली बनेको थियो।
यस चित्रकला "को चुम्बन", पूर्ण देखाए जो व्यक्तित्व को पहिलो manifestations, कला इतिहास को संग्रहालय को डिजाइन मा देख्न सकिन्छ। यो थियो 1891 मा klimt, सटीक लागि कलाकार प्रेम देखाए जो प्रमाणित र ornamentalism silhouettes allegorical तथ्याङ्कले, चित्रण गर्ने, सिढी एक सेट डिजाइन। तर, निर्माण कार्य को सिद्धान्त परिवर्तन छ समय - को XIX सताब्दी को अन्त द्वारा तिनीहरूले ठूलो प्रतीकात्मक रूप र सजावटी तत्व प्राप्त।
Gustav klimt - अत्युक्ति बिना शताब्दीको पालो मा अष्ट्रीया अग्र-दल को ध्यान। उहाँले "Secession" चित्रकला को क्षेत्र मा अग्रगामी द्वारा स्थापित भएको थियो जो समुदायहरू को गतिविधिहरु मा सक्रिय भाग लिए।
Klimt सबैभन्दा महत्वपूर्ण काम (र प्रसिद्ध चित्रकला "को चुम्बन" साथै) रचनात्मकता को लेट अवधि हौं - यो चरण मा छ, फरक अचम्मको स्पष्टता, पनि प्रकृति परिवर्तन, दृश्य कोण को परिवर्तन आधारमा छन् "मोशाको" र slozhnosochinennogo तस्बिरहरू को सूक्ष्म प्रभाव सबै पोट्रेट । आफ्नो काम एकता र दार्शनिकहरू द्वारा गाया जुन Opposites, को संघर्ष देखाउन। एक हात मा, गुस्ताव छवि वस्तुहरु को प्रक्रिया मा स्वतन्त्रता को लागि उत्सुक। Klimt दर्शक हामी उच्च कथित वास्तविकता र समय छ कि संसारको सारा fickle र incomprehensibility व्यक्त गर्न खोज्छ रूपमा canons तोडने लागि यो तिर्खा, बनाउँछ प्रतीकात्मक रूप मामलामा लिखित वस्तुहरु बुझ्ने। अन्य मा - त्यहाँ उपासना गर्न, र अब ornamentation चौरसाई, यसको सबै को naturalness प्रकृति महिमा गर्छ।
सामान्य मा कला नोव्यू र कला रूपमा connoisseurs बीचमा सबैभन्दा ठूलो ख्याति तस्विर जी klimt गरेको "को चुम्बन" पाउन।
यो काम कलाकार को "सुनको युग" पर्छ कि टिप्पण लायक छ - त्यसपछि त्यहाँ सजावटी डिजाइन काम आफ्नो आकर्षण, सुनको प्रशस्त मात्रामा व्यक्त भएको थियो।
तथापि, klimt काम सुन छाडा देखिएन कि छैन र मांसल cherubs को विचार evoke छैन यस्तो हो। यस मामला मा रंग चित्रकला उत्पादित समग्र प्रभाव बढाउँछ जो एक उत्प्रेरक, को भूमिका लिन्छ।
1907 र 1908 को बीच पूर्ण रचनात्मक खाली लिएर चित्रकला एक वर्षको लागि यो भन्दा labored "को चुम्बन", को लेखक।
लोकप्रिय विश्वास अनुसार, चित्र को इतिहास अर्को। अर्ल जसको नाम हामीलाई तल आएको छ, आफ्नो दुलहीको लागि वरदान रूपमा कलाकार चित्रकला अह्राउनुभयो। ग्राहकका लागि मुख्य सर्त दुलही संग ग्राफ मा फ्यूज देखाइने थियो भन्ने तथ्यलाई थियो एक भावुक चुम्बन।
अनुकूल चित्रकार, सबै थाह कसरी गर्न, तर aristocrat आफ्नो प्रिय, खुसी थियो प्रभावित खोजिरहेका। तैपनि, उहाँले एक प्रश्न रुचि थियो। केही कारणले, उनको ओठ तस्वीर नायक प्रत्येक अन्य छोयो कहिल्यै? कि klimt जवाफ "भन्ने योजना थियो," उहाँले पूर्ण प्रेम र चाहनालाई इच्छा चुम्बन लिनुअघि कि व्यक्त गर्न खोजे। जवाफ ग्राहक सन्तुष्ट, र उहाँले आफ्नो प्रिय को तस्वीर प्रस्तुत। महिला त त्यो तुरुन्त विवाह प्रस्ताव स्वीकार गर्ने काम प्रभावित।
जब यो ज्ञात चित्रकला भयो "द चुम्बन" klimt द्वारा एक जबकि, पछि, कथा लेखक द्वारा पूरक थियो। यो गुस्ताव लेखन प्रक्रिया मा आफूलाई केटी एउटा आकर्षण महसुस भनेर बाहिर जान्छ। र किनभने अनि डाह को hers गणना को ओठ स्पर्श गर्न अनुमति छैन।
यस चित्रकला को संरचना एकदम सरल छ - यो लोडमा छैन वा अभिनेता को एक प्रशस्त, न त समग्र अवस्था को जटिलता। पूर्ण निष्कपटता र के यो साँच्चै रोचक छ को एउटा विवरण - कि klimt छ।
फूल Meadow, एक cliff मा स्थित। प्रेममा जोडी संसारबाट पृथक यो Meadow मा, प्रत्येक अन्य र सामान्य भावना संग विशेष पठाइएको। सुन आभा, कुल detachment तस्वीर एक ठाउँमा वा उमेर बाँधिएको छैन। यो कार्य को मात्रा को छाप सिर्जना, र यो क्रूर समय विषय छैन। कुनै इतिहास, मानव र प्राकृतिक कुनै समस्याहरूको - केही छैन। यस चित्रकला "को चुम्बन" (फोटो) दर्शक बस प्रेमीहरूको देखाउँछ।
उल्लिखित रूपमा, यो चित्रकला को "सुनको उमेर" klimt समयमा लेखिएको थियो, त्यो आफ्नो विचार को सजावटी अभिव्यक्ति ठूलो महत्त्व संलग्न। द्वारा र ठूलो छ, समयमा कलाकार को काम को लोकप्रियता मा एक महत्वपूर्ण भूमिका प्रेम प्ले सुन पात। यो रंग कुन जादुई सकिन्छ दर्शक, मा एक प्रभाव थियो - उहाँले, आकर्षित मोहित वजन दिनुभयो र हड्डी छ जो solemnity एक अर्थमा, डाले। सुन धार्मिक भवनहरु को दर्ता प्रक्रिया मा पहिलो भाइलिन प्ले छ कि कुनै आश्चर्य, यो छैन?
निस्सन्देह, कुनै एक निश्चित छैन अब यो मनमा आफ्नो काम, गुस्ताव klimt लेखन प्रक्रिया मा थियो भनेर भन्न सकिन्छ। यो देखे जो कोहीले, द्वारा चित्रकला "द चुम्बन" को विवरण आत्मपुरक छ। तथापि, लगभग सबै नै भावना evince।
को "चुम्बन" बाट आ अचम्मलाग्दा प्रकाश, पूरै तस्वीर को अर्थ conveys। कुनै संक्रमण, दुई-आयामी विमान पूर्ण अर्थमा - छवि गहिराई न्यूनतम कम छ। ठाउँ चित्रहरु यो पाठ्यक्रम मार्फत लगभग अपार जस्तो देखिन्छ।
र पुरुष र महिला impossibly सुवक्ता को मुद्रा - उहाँले दर्शक टाढा, बन्द पूर्ण सबै बाह्य देखि नै अलग गर्न, आफ्नो प्रिय आफ्नो ध्यान गरियो। उहाँले आफूलाई मात्र साथ व्यस्त छ।
रंग र ढाँचाको प्रभाव
को आलोचकहरु को सबैभन्दा चित्रकला "द चुम्बन" आफ्नो सबै परिमाण मा एक संघ छ, तर यो नायक को राज बस्त्र मा केंद्रित बताए। मानिस मेहनत, स्पष्ट पक्षबाट निहित, खैरो कालो र सेतो को टन क्षेत्रहरू, एक महिला motley प्यालेट छुट्टयाएर एक कोमल गोलाकार घटता छ जबकि - तथापि, तपाईं राम्ररी हेर्न भने, हामी वस्त्र मा विपरीत देख्न सक्छौं। कारण तिनीहरूले कारण समग्र मोशाको ढाँचा आभूषण गर्न mitigated छ विशेष गरी देखि, एक साधारण सुनको हेलो, उपेक्षित को तस्बिरहरू यो फरक साझेदारी भन्ने तथ्यलाई गर्न।
यो उहाँको हड्डी को हेलो को स्रोत, एक मानिस छ कि विचारणीय छ। उहाँले आफ्नो ओठ गर्न थिचेर, महिला घेरिएको थियो। प्रयोग यो प्रविधी मौका गुस्ताव klimt द्वारा छैन। "द चुम्बन" -, मानिसहरू र अनुपालन को महिला को बल मा आधारित प्रकृति को एक उत्सव जस्तै सुनिन्छ एक चित्र। मायालु, एक शक्तिशाली र राजसी, तर कोमल - यो एक मानिस क्यानभास को कुल ऊर्जा निर्धारण गर्छ। आकृति आफ्नो घंटी समान कुनै दुर्घटना, पुरुषार्थ - यो अन्डरस्कोरहरू साँचो "पशु" सम्बन्ध त्यहाँ sociality को कुनै ठाउँ, अधिकार र कसले सीमाहरु धुन दूर sexes बीच खोजिरहेका थिए ती वर्ष, जीवन को अन्य तत्वहरूका लागि सङ्घर्ष हो जसमा subtext। प्रिय स्त्रीको विपरीत उहाँलाई सामेल थियो जो kneeling, चित्रण गरिएको छ जा रहेको छ, आफ्नो सारा मुद्रा नम्रता र बयान प्रदर्शन।
दुर्भाग्यवश, धेरै केवल एक अध्ययन कलाकार गुस्ताव klimt को प्रतिभा मूल्यांकन। "द चुम्बन" - आफ्नो निष्कपटता र अचम्मलाग्दा मा एक शानदार को एक तस्वीर, तर यसको काम सीमित छैन। यो अन्याय लागि बनाउने, हामी कुनै कम ध्यान दिनुपर्छ गर्ने कलाकार, काम केही जोड दिइएको छ।
Ironically, "चुम्बन" को विरोध, तर कुनै कम निष्कपट। यो चित्र XX सताब्दी को शुरू अघि वर्ष को एक जोडी को लागि चित्रित थियो - यो समय एक व्यक्तिको रूपमा आफूलाई को प्रकटीकरण महिला लागि पहिलो अवसर देखा पर्न थाले मा यो थियो। अझ - समय मा मानिसजातिको निष्पक्ष आधा को नियम को विचार सहन। यी रुझान को personification छ देवी एथेना मन, बुद्धि र अठोट को ध्यान - Pallas। त्यो मा आफु विश्वस्त छ, त्यो यो एक हात उधारो मात्र पर्याप्त छ, विजय को कुनै शङ्का थियो। यस चित्रकला "को चुम्बन" अन्यथा, छैन भन्छ? interweaving शरीर र ornamentation, ढाँचाहरू र चरित्र पृष्ठभूमि - - एक र यद्यपि, तस्वीर को लेखन पहिले नै ट्रम्प klimt hereinafter हुनेछ तत्व उदीयमान। र बस ती आँखा हेर्न! आफ्नो आँखा मा दुनिया को सबै superhuman बल र शक्ति।
यो तस्वीर, आफ्नो पत्नी एक उपहार बनाउन निर्णय गर्ने उद्योगपति को क्रम सिर्जना मा, klimt यसको सबै शक्ति गरियो। यो एक tandem जैविक यथार्थवाद र abstraction छ। Interweaving Mycenaean spirals र मिश्री आँखा भन्छन् exoticism र कामुकता काम लुकेका बस छैन। प्रेम पारित परिदृश्य Reiterates, तर मुख्य फरक कलाकार एक आपसी भावना यो समय थियो भन्ने छ। यस चित्रकला "को चुम्बन" ", स्वर्ण अदेले" को मा दम्पतीको प्रेम को जेनिथ प्रतिनिधित्व गर्ने klimt wilting संलग्न, सुंदरता, एक महिला शक्ति र radiance असर थिएन जो चित्रित।
उनको नाम अदेले Bloch Bauer थियो। उनले टाउको दुखाइ भोगिरहेका थियो भन्दा धेरै पुरानो थियो र सुर्ती लागि एक तीव्र स्नेह मानिसलाई गर्न विवाह भएको थियो। Klimt आफ्नो प्रिय पत्नी को एक पोर्ट्रेट रंग गर्न, पति भाडामा। आफ्नो बैठक 1904 मा आयोजित, त्यसै वर्ष काम चित्रकला मा सुरु भयो। र एक मास्टर र मोडेल बीच रोमान्स।
मनोवृत्ति र अदेले गुस्ताव द्वारा श्री Bloch Bauer देख्यो, तर एक झगडा उठाउनु भएन। उहाँले फरक हुन्थे - सँगै सकेसम्म धेरै समय खर्च गर्न एक जोडी को आदर्श पोर्ट्रेट को अनन्त धंधा मा गरे। योजना सफल भएको थियो - भावना प्रेमीहरूको प्रत्येक अन्य थकित, फिक्का। यो अधूरा थियो "स्वर्ण अदेले" गोप्य सम्बन्ध, तुरुन्तै समाप्त भयो।
यो माइकलएन्जेलो को सिस्टिन चैपल को छत मा गोप्य सन्देशहरू बाँकी थियो त्यो सत्य हो?
वस्त्र र भित्री मा कोबाल्ट रंग
Andrea Palladio: जीवनी, काम
को पुनर्जागरण को वास्तुकला
तस्वीरहरु, कथा समय: कुटिया मा "मयुर" हेर्छ। को कुटिया एक हल मा "मयुर" हेर्ने हो र तिनीहरूले जन्म दिन कहिले?
शैली चित्रकला, वा कसरी कलाकार को दुनिया मा हेर्न?
Kaspersky कसरी सक्रिय? तीन सक्रियता विधि
अलेक्जेन्डर Solzhenitsyn: उत्पादन, एक संक्षिप्त विवरण
कलरहरू हटाउन सकिने - सधैं बलियो र स्टाइलिश!
रूस Gennadiy Petrovich Lyachin को नायक - को पनडुब्बी K-141 "कुर्स्क" को कमान्डर
एक स्वादिष्ट र पोसिलो jellied चिकन खुट्टा कसरी बनाउने
दस्तानेको आकारको तालिका - सबैलाई मद्दत गर्न
कोसोभो (गणतन्त्र): राजधानी, जनसंख्या, क्षेत्र
Bazarov छवि: मानिस आफ्नो समय अगाडि एक कदम हिड्ने
कफी को मूल लेख
Renault Fluence कार। समीक्षा